उपराष्ट्रपतिलाई स्वागत गर्न चर्काे घाममा सयौं विद्यार्थीलाई घण्टौंसम्म उभ्याइयो ! « News24 : Premium News Channel
उपराष्ट्रपतिलाई स्वागत गर्न चर्काे घाममा सयौं विद्यार्थीलाई घण्टौंसम्म उभ्याइयो !
रौतहट । रौतहटको कटहरियामा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको स्वागत गर्न कटहरिया नगरपालिकाले २३ विद्यालयका सयौं विद्यार्थीलाई घण्टौ चर्कोमा घाममा राखेको छ । मंगलबार कटहरिया नगरपालिकाले आयोजना गरेको जानकी जयन्ती समारोहमा नगर शिक्षा शाखाले विद्यालयको ब्यानरसहित विद्यार्थी शिक्षकलाई अनिवार्य उपस्थित हुन उर्दी जारी गरेको थियो ।
यही कारण कटहरिया नगरपालिकामा रहेको संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी उपराष्ट्रपति पुनको स्वागतका लागि घण्टौ घाममा बस्नु परेको थियो । ४० डिग्री सेल्सियसको उखरमाउलो गर्मीमा विद्यार्थीले पानी समेत पिउन पाएका थिएनन् ।
सोमबार प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको थियो । विद्यालय बन्द भएपनि कार्यक्रममा स्थलमा विद्यार्थी विद्यालय पोशाकै थिए । शिक्षा ऐन अनुसार विद्यार्थीलाई शैक्षिक कार्याक्रमहरु बाहेक अन्य कार्यक्रममा विद्यालय, सरकार वा गैरसरकारी कुनै पनि संघसंस्थाले अनिवार्य उपस्थित गराउन पाइदैन।
तर स्थानीय निकाय मातहत आधारभुत शिक्षा पुगेपछि भने नगरपालिकाले आफू अनुकुल विद्यालय व्यवस्थापन, प्रशासन तथा विद्यार्थीलाई प्रयोग गर्न थालेको छन् ।